Isbarbardhiga Medicaid iyo Medicare Waad heli kartaa labaduba. | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
La Soo Geliyay: Janaayo 17, 2020
Taariikhda Ugu Dambaysay ee La Cusbooneysiiyay: Context link Abriil 02, 2021
Isbarbardhiga Medicaid iyo Medicare. Way adag tahay in laga fikiro laba erey oo jahawareer intaas le’eg keena.
Waa maxay farqiga u dhexeeya labadaan barnaamij ee caymiska caafimaadka dawladda ah?
Maxay dhab ahaantii yihiin Medicaid iyo Medicare?
Yaa u-qalma inuu helo Medicaid ama inuu helo Medicare?
Oo sidee dadka qaarkood ku heli karaan labaduba?
Akhri si aad u hesho jawaabaha su'aalahaan iyo kuwo kale oo badan.
Waa maxay farqiga u dhexeeya Medicaid iyo Medicare.
Farqiga u dhexeeya Medicaid iyo Medicare waa in Medicaid ay maamulaan dawlad-goboleedyada waxaana lagu saleeyaa dakhliga. Medicare waxaa maamula dawladda dhexe waxayna inta badan ku saleeyaan da'da. Balse waxaa jira duruufo gaar ah, sida naafonimada qaar, kuwaasoo u oggolaanaya dadka da'da yar inay helaan Medicare.
Waa maxay Medicaid?
Medicaid waa hab aad ugu hesho daryeel caafimaad qiimo jaban ama mararka qaarkood lacag la'aan ah. Medicaid waxaa maamula gobol kasta, sidaas darteed shuruudaha u-qalmitaanka way isbeddeli karaan gobol ka gobol. Gobolkaagu waxaa laga yaabaa inuu xitaa magac gaar ah u sameeyo barnaamijkiisa Medicaid. Waa muhiim in la xasuusnaado inay tahay inaad dib u xaqiijiso Medicaid sanad walba.
Medicaid caadi ahaan wuxuu daboolaa:
Waayeelka iyo dadka qaba naafonimada
Dadka qaangaarka ah ee dakhligoodu hooseeyo ee u-qalma
Medicare waa barnaamijka caymiska caafimaadka ee qaranka oo ay maarayso dawladda dhexe. Medicare wuxuu daboolaa:
Dadka dadoodu tahay 65 jir iyo ka weyn.
Dadka qaarkood ay da'doodu ka yar tahay 65 jir kuwaasoo ugu qalmi kara naafonimada ama xaalad kale oo gaar ah awgeed.
Medicare wuxuu ka caawiyaa malaayiin waayeelka Maraykanka ah iyo shakhsiyaadka naafada ah inuu ka daboolo qaar ka mid ah kharashka daryeelka caafimaadkooda. Waxaa jira 4 qaybo kala duwan oo ka mid ah Medicare. Tani waxay siinaysaa dadka dooqyo daryeel caafimaad oo badan, si ay u doortaan qorshaha daryeelka caafimaadka ee sida ugu wanaagsan u daboolaya baahidooda.
Waa maxay 4 qaybaha uu ka kooban yahay Medicare.
MACLUUMAAD KUU GAAR AH: Part A iyo B ayaa sidoo kale loo yaqaanaa “Original Medicare.”
Wuxuu gacan ka geystaa bixinta kharashka ku jirista isbitaalka iyo daryeelka bukaan-jiifka.
Wuxuu gacan ka geystaa kharashka booqashooyinka dhakhtarka iyo daryeelka bukaan-socodka.
Shirkadaha caymiska ee gaarka loo leeyahay waxay bixiyaan noocyo kale oo qorshooyinka Medicare ah oo leh macaashyo dheeraad ah oo ka baxsan Original Medicare:
Wuxuu ka dhigaa Part A (caymiska isbitaalka) iyo Part B (caymiska caafimaadka) ee hal qorshe kaasoo inta badan uu ku jira caymiska daawada dhakhtarku qoro sidoo kale.
Caymiska daawada dhakhtar qoro.
Sidee ayaad ku heli kartaa Medicaid iyo Medicare labaduba?
Dadka qaarkood waxay ugu qalmaan Medicare da'da awgeed (waa 65 jir ama ka weyn) ama naafonimo awgeed. Sidoo kale way u-qalmaan Medicaid sababtoo ah waxay buuxiyeen shuruudaha loogu qalmo caymiska Medicaid ee ka jira gobolkooda. Dadkaan waa “dad u-qalma labada caymis” waayo waxay u-qalmaan Medicaid iyo Medicare labaduba.
Waa maxay qorshayaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah?
Qorsheyaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah waxaa loogu talagalay kaliya dadka haysta Medicaid iyo Medicare labaduba. Waa nooc gaar ah oo ah qorshaha Medicare Part C (Medicare Advantage). Qorshayaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah waxay ka kooban yihiin caymiska isbitaalka, caafimaadka iyo daawada dhakhtarku qoro. Waad haysan doontaa dhammaan macaashyadaada Medicaid. Waxaa intaas dheer, waxaad heli kartaa macaashyo ka badan kuwa Original Medicare. Waxaadna ku heli kartaa wax kasta wax ka hooseeya $0 carbuunta qorshaha.
Eeg maqaalka "Miyaan Waayi Doonaa Macaashyada Medicaid?".
Waa maxay qorshayaasha laba geesoodka ah ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah?
Qorshayaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah waxaa sidoo kale loo yaqaan qorshayaasha laba geesoodka ah ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Waxaa bixiya shirkado caymis oo gaar loo leeyahay, marka waad heli kartaa qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah ee sida ugu wanaagsan u buuxinaya baahiyaha caymis ee caafimaadkaaga. Inaad ku jirto qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah wax kama beddelayso u-qalmitaankaaga ama macaashyada Medicaid.
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 04.18.2022 waqtiga 03:03 GALABNIMO CDT